I-Decoora yiwebhusayithi yeBlog yangempela yeBlog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe Ilizwe lomhombiso, kwaye kuyo siphakamisa izimvo zoqobo zekhaya lakho, igadi, iofisi ... ngelixa sithetha ngeendlela kunye nophuhliso kwicandelo.
El Iqela labahleli beDecoora yenziwe ngabalandeli behlabathi lomhombiso abonwabileyo ukwabelana ngamava abo kunye nesakhono. Ukuba ufuna ukubayinxalenye yayo, ungathandabuzi sibhale ngale fomu.
Nangona ndizalathisile izifundo zam kwicandelo lezemveliso kunye nobunjineli, zininzi ezinye izinto ezizalisa kum njengomculo, uyilo lwangaphakathi okanye ukupheka. I-Decoora indinika ithuba lokwabelana nani nonke iingcebiso, izimvo kunye nee-DIY malunga nomhombiso.
Kuba bendimncinci ndijonge umhombiso wayo nayiphi na indlu. Kancinci kancinci, umhlaba woyilo lwangaphakathi uqhubekile nokundonwabisa. Ndiyakuthanda ukubonisa ubuchule bam kunye nocwangco lwengqondo ukuze ikhaya lam lihlale lilungile ... kwaye ndincede abanye ukuba bakufezekise!
Ndandihlala ndicacile ukuba into yam kukuba ngutitshala. Kungoko ndinesidanga kwiPhilology yesiNgesi. Kodwa ukongeza kubizo, enye yezinto endizithandayo lihlabathi lomhombiso, ucwangco kunye nobugcisa bokuhombisa. Apho uyilo kufuneka luhlale lubakhona kwaye ngumceli mngeni endiwuthandayo.
Ngedigri kwintengiso, eyona nto ndiyithandayo kukubhala. Ukongeza, ndinomdla kuyo yonke into enomdla kwaye intle, yiyo loo nto ndingumntu othanda ukuhombisa. Ndiyazithanda izinto zakudala kunye ne-Nordic, izitayile zeediliya nezeshishini phakathi kwabanye. Ndifuna inkuthazo kwaye ndinikezele ngezimvo zokuhombisa.
Ngoku ndingummeli kunye nomngenisi wefenitshala ephezulu, ikakhulu eNordic, emva kweminyaka eli-10 yamava kwicandelo loThengiso, okokuqala njengomphathi wevenkile kuyilo nakwigumbi lokubonisa kwigumbi lokubonisa eMadrid, kwaye kamva njengomyili wezinto zangaphakathi kunye nokucacisa studio yokwakha. Ndihlala ndichonga ii-idiosyncrasies zoyilo lweScandinavia: kubalulekile, ukusebenza, ukungaphelelwa lixesha, imibala kunye nokukhululeka kobugcisa.
Abaphumelele kwi-Hispanic Philology, abanomdla ngeeleta kunye nazo zonke izinto ezintle ngobuhle. Umdlalo endiwuthandayo: ukuxelela ilizwe ngezinto endizibonayo ngayo yonke into enxulumene nomhombiso wangaphakathi kunye nezinto zoyilo. Ndiyathemba ukuba uyawonwabela umxholo wam.